Shiinaha Custom logo bacaha waaweyn ee wax iibsiga ee dib loo isticmaali karo oo leh naqshad xarig ah oo loogu talagalay iibka Soo saaraha iyo Alaab-qeybiye | Zhihongda
Calaamadaha gaarka ah ee bacaha waaweyn ee wax iibsiga ee dib loo isticmaali karo oo leh naqshad xarig ah oo iib ah
waxaan bixinaa dammaanad qancin 100%. Haddii aad wax dhibaato ah ku hayso badeecadan, fadlan nala soo xiriir adeeg.
Boorsooyinka kubbadaha Eco-Friendly waa kuwo dib loo isticmaali karo, la baabi'in karo, oo dib loo isticmaali karo.
Dharkan xayeysiinta ah wuxuu leeyahay gacmo-is-qabsi ah si aad si raaxo leh ugu qaadi karto gacanta ama garabkaaga. Bacdan isku laaban, ee miisaanka culus ee shaashadda leh waxay leedahay hal qol oo waaweyn oo waasac ah, 3 ″ D Hoose Gusset, iyo afka oo aad u kala furan ayaa sahlaya in la rarro oo la soo dajiyo alaabtaada.
1. waxaan bixinaa dammaanad qancin 100%. Haddii aad wax dhibaato ah ku hayso badeecadan, fadlan nala soo xiriir adeeg.
2. Boorsooyinka isku dheelitiran ee Eco-Friendly waa kuwo dib loo isticmaali karo, la baabi'in karo, oo dib loo isticmaali karo.
3. Kubadan xayeysiinta ah waxay leedahay gacmo is-qabsi ah si aad si raaxo leh ugu qaadi karto gacanta ama garabkaaga. Boorsadan la isku laaban karo, ee miisaanka culus ee shaashadda leh waxay leedahay hal qol oo waasac ah oo waasac ah, 3 "D Hoos Gusset, iyo afka oo aad u kala furan ayaa sahlaya in la rarro lana soo dejiyo alaabtaada.
4. Boorsooyinka dharka lagu dhejiyo ee tayada sare leh ee dib loo isticmaali karo ayaa ku habboon dukaamaysiga, iskuulka, shaqada, safarka, jimicsiga, xeebta, kaniisadda, DIY caadada ah, farshaxanka & farshaxanka, qurxinta, aroosyada.
5.SIZE: Cabbirro kala duwan oo aad dooran karto. Ku fiican baahiyaha xayeysiinta, wax bixinta, xayeysiinta ganacsigaaga, bandhigyada ganacsiga.
Magaca Shayga Calaamadaha gaarka ah ee bacaha waaweyn ee wax iibsiga ee dib loo isticmaali karo oo leh naqshad xarig ah oo iib ah
Hore: Dukaameysiga wax soo iibsiga bey'ada saaxiibtinimada leh ee 100% bacda weel shiraac leh gusset
Xiga: Raqiis 100% Suuf Cunista Dukaan Dukaan lagu iibinayo oo leh Gusset iyo jiinyeer
Eco-saaxiibtinimo Awoodda La-qaadan karo ee La-Isticmaali Karo S ...
Dukaamada cuntada laga iibsado bey'ada saaxiibtinimada leh 100% canva ...
Xayeysiinta Xayeysiinta Macaamiisha Daabacan ee Calico ...
Duty culus Isticmaalka Cotton Raashinka Shopping Can ...